Kedu ihe nkwụsị ọnụ ahịa ego? Nkọwa okwu nke ụkọ ego
Malite mgbazinye ego Wiki mmasị ọnụego gbanwee
Ị chọrọ akwụmụgwọ? Ị nwere ike iji nhọrọ dị iche iche mee ihe ugbu a. Ọ dị mkpa maka akwụmụgwọ na ị kwụrụ azụ. N'ọnọdụ ọ bụla, jide n'aka na ị nwere ego zuru oke iji mee ya. Ugbu a, a na-akpọ ya mmasị ọnụego gbanwee, Nke a bara uru nye gị n'ọtụtụ ọnọdụ, ma ọ pụkwara inwe mmetụta dị njọ. Ha anaghị akwụ ụgwọ a na-akwụ ụgwọ, dị ka ọtụtụ mgbazinye ego, mana uru dị na nkwekọrịta ahụ.
Otú ọ dị, nke a na-agbanwe mgbe niile. Nke ahụ bụ, ọnụego mmasị na ahịa gbanwere kwa ọnwa ma ọ bụ nkeji iri na ise ma dabere na ọ dị, ị ghaghị ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ obere mmasị. Otú ọ dị, nkwekọrịta nkwekọrịta mbụ ahụ, enweghị ihe jikọrọ ya na ya. Nke a anọgideghị na-emetụta ụfụ ego ọnụego, na nke a bara uru maka gị. Ụzọ a ị nwere ike ịkwụ ụgwọ mbinye ego ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-ebu ụzọ lee anya na n'akụkụ abụọ tupu ịre ngbanwe ego ọnụego. Onye nlekọta ụlọ akụ nke gị bụ kọntaktị kwesịrị ekwesị maka nke a. Ya mere, ị ga-ahụ na ọ bara uru ịgwa onwe gị nke ọma tupu oge eruo. Ya mere i ji n'aka na ị nwere ike ime atụmatụ nke gị. Ị ghaghị ijide n'aka na ị dị ezigbo mma na ya ma na ị nwere ike ile anya mgbe ọ bụla na ụfụ mmasị na-agagharị ugboro ugboro. Ya mere, ị maara ngwa ngwa ihe ị ga-akwụ ma nwee ike inweta ọtụtụ ozi ndị ọzọ. Mgbanwe ụtụ ọnụ ahịa bụ n'ezie ihe dị mma maka gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ imeri ihe. Otú ọ dị, ọ bụghị nanị na ị ga-ahụ uru ndị dị na ụdị usoro a, ma ọ bụ ihe ọghọm. Taa ọ bụ banyere ọtụtụ azụmahịa iwu, nke nwere ike na-agba ọsọ nke ọma. Ị ga-ama mgbe niile gbasara ohere gị.
Naanị ma ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na ị nwere ike ịme ihe dị mma ma nweekwa ọtụtụ. Onu ogugu onu ogugu nwere ike inye gi uru. Ma naanị gị kpebiri ma ọ bụrụ na nke a bụ ihe kwesịrị ekwesị maka gị. Ị ghaghị ịtụle nke ọma, n'ihi na n'ọnọdụ kachasị njọ ị nwere ike ịkwụ ụgwọ. Onu ogugu na-agbanwe agbanwe bu ihe kwesiri ka gi na onye nyocha kparita uka. Ị ga-ewepụta oge maka ọkwa a wee mee ka ihe niile kọwaa nke ọma. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, jụọ ha ozugbo.
Onye ndụmọdụ ụlọ akụ ga-enwe obi ụtọ ịkọwa uru na ọghọm nke swap mmasị. Ya mere ị kwenyesiri ike na ị gaghị efu ihe ọ bụla na iji ihe niile nwere ike ime. Jide n'aka na ị na-ele nkwekọrịta ahụ tupu ị banye ya. Ị ghaghị ijide n'aka na ị gaghị aga na-ezighị ezi. Nkwekọrịta ahụ dị gị n'aka ma ị nwekwara ike ịlele akwụkwọ ahụ na onye ọka iwu. Ị ga-eme oge iji nyochaa nkwekọrịta a nke ọma. Ọ dị mkpa taa karịa mgbe ọ bụla ilele anya na nkwekọrịta niile. N'ọtụtụ ọnọdụ, ụlọ akụ nke ụlọ akụ na-akwụ ụgwọ. Naanị mgbe ị nwere mmetụta dị mma ị nwere ike iji swap mmasị ọnụego. Ya mere ị kwesịrị ile anya ma gụọ nkwekọrịta ahụ nke ọma. Ọ bụrụ na i mere nke a, ị nwere ike ịbanye akọnuche dị mma. Ọ bụrụ na ịnweghị n'aka, ịkwesịrị iji ya ma jiri oge mmasị dị mma.
Rating: 3.5/ 5. Site na 2 votes.
Isiokwu bu nke aKwa ọnwa
Isiokwu ọzọAC Discount n'aka